Dad diifaysan ama duruufaysan maha in lagu digto Qalinkii Abdinasir Hassan.
Asaalamu calaykum waraxmatulaahi wa barakaatu, dhamaantiin waqtigu ha idiin samaado, qofkastana nimcada Alle SWT ha u siyaadiyo dhibkana haka hayo. Meertooyinka ayaamuhu ninba meelbay ku xidheen,aminkastaana sharkeeda iyo khayrkeeda ayey wada taa. Qiyaasta iyo fahanku hadday khaldamaan qofnimadda qofkuna way luntaa, Dhib Markuu ku habsado qof kale adna aad nimcaysatay ogsonow waa imtixaan e , dhibka iyo dulimigu lamuu dhalan cid gaara see waa dhib warwareega oo marba cid ku habsada, maalinkuu Alle SWT doono in uu ummad ku rido cidna kama baajin karto. waxaa dhib iyo arxan darro ah inaad ku faraxdo dhib qof muslim ah soo gaadhay, dhalashada saxda ahi waxay Ina tusaysaa in dadka muslimka ahi dadka kale iskaga dhowyihiin. قال تعالي﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
﴾ Alle wuxuu yidhi “Ragga iyo dumarka ilaahay rumeeyey xigto ayey isu yihiin, wanaaga ayey is farayaan, xumaanta ayey isu diidayaan, salaada ayey tukanayaan,sakatana way bixinayaan, alle iyo rasuulkiisana way racayaan, Kuwaas alle ayaa u naxariisanayaa, allena isagaa cid kasta ka adag waxkastana wuxuu dhigay halkii ku haboonayd “. Alle SWT wuxuu ina tusiyey sidaynu dadka iskaga xigno, ma caqli galbaa dad dadka iska xigaa inay isku digtaan ? Siday aniga ila tahay ma haboona in laysku digtee waxaa roon in lays kaalmeeyo ,dadkana layska xigsado. Horaa loo yidhi “Bawdyo Rag maalinba midbaa qaawan “.
Maanta haddii alle uu waxkasta ku siiyey ku Mahdi Alle SWT,walaalkaaga intaas aan haysanna haku digan ee alle u tuug in uu dhibka ka dulqaado,sidaas ayaa alle kugu barakayn waxaad haysato, walaalkaana kuugu garaabayaa. Kibirkaaga iyo aqoon daradaada haku yaboohsan dhib kaa fog. Dadka aad diinta wadaagtaan waa inaad danaysaa farxadooda iyo muragadoodana la qaybsataa, ileen dadka waad iska xigtaane, togba taagtii rogmadaaye walaal u ducee in alle ka faydo walaalaha muslimiinta ee meelkasta ku dhibaataysan.
Dadka maanta jooga badankooda waxaa iskaga khaldan siyaasadda iyo diinta,maanta dalalka islaamku siyaasad ahaan ma midaysna laakin intooda baddan diinta way ka midaysanyihiin iyo in laysu damqado markuu dhib yimaado. Waa kii abwaankii waynaa ee Xaaji Adan afqalooc lahaa “Dubkaa kala taggane haybta, waysugu tegeynaaye Cilmi maaha kaa tamar badniyo, tiir biraan ahaye , Ninba tiisu waa dhimantahoo, toogo beel ma leh e.
Tabantaabo lays caawiyaa, waa tu waajib ah e, Tisciin gaajo haysaa jiroo toban dhergaysaaye, Kuwaasoo wuxuun lagu taray, tahay aqoontiiye”. ugu danbayn ,dadku qofka waxay ku qiimeeyaan hadalka iyo wuxuu qoraayo markaa intaynaan ummadda qoraal ama hadal u soo bandhigin aan iska hubino, maantana waxaynu ku noolnahay adduun uu hagaha noloshu noqday is gaadhsiinta. Cidna haddaanad wax tarayn waxaa muddan inaad dhibkaaga ka haysato, dadkana baasha ka raacdo.